Perikopa Feb 2020 – FJKM
Maneho ny tana-maheriny ny Tompo Andriamanitra
Miara-misaotra an’Andriamanitra mahery isika noho ny volana Janoary 2020 izay madiva hivalona . Volana niandohan’ny Fiangonana tao anatin’ny lohahevitra hoe: “Maneho ny tana-maheriny ny Tompo Andriamanitra« . Raha ny perikopa ny Alahady faran’ny volana Janoary no anehoana izao lohahevitra izao dia :
Ezekiela 20, 30- 38: Diso fanantenana hatrany Andriamanitra noho ny Zanak’ Israely olony izay efa nanehoany ny fitantanany mahery kanefa dia miverina manao ny fanaon’ny razany ihany izy ireo. Ity toko ity dia ahitana taratra izany. Noho izany, maneho ny tàna-maheriny amin’ny olony ny Tompo Andriamanitra ka mikapoka azy nefa onena ka mamindra fo aminy indray. Rehefa haneho ny hery manafaka ny olony Andriamanitra dia manao ny fanambaran-tenany eo amin’ny olony Izy (“Izaho no…”.Zahao and.5- 6, and. 12, 20, 26, 38…). Io Fisehoan’Andriamanitra (Epifania) amin’ny olony io no fanomboham-panehoany ny heriny. Efa nasehon’Andriamanitra ho an’izao tontolo izao i Jesoa Kristy, Zanany sady Andriamanitra mba ho fisehoan’ny tàna-maheriny hanafaka ny olona eo ambany vahohon’ilay ratsy.
Matio 8, 1- 4 :Afaka vakiana amin’ny endriny roa ity perikopa ity ka amaliana ny fanontaniana hoe: Iza no Tompo Andriamanitra ary inona no endrika hanehoany ny heriny ?
I Jesoa no Tompo Andriamanitra. Nidina avy any an-tendrombohitra Izy mba hahatsiarovana fa efa nidina avy tany an-danitra izy, ho ety an-tany mba haneho ny heriny. Ho fanekeny ny fidinany hamonjy ny fandrarana mba tsy hankalazain’ilay boka sitrana ny aminy. Mitarika ny olona amin’ny fahadiovana izy, toy ny nanarahan’ny olona Azy eto ka nanadiovany ilay boka. Mendrika iankohofana Izy amin’ny maha Andriamanitra azy, ka amin’izany dia Izy Andriamanitra mihitsy no mandidy ny olona amin’izay tiany itondrana azy fa tsy ny olona no manao izay heveriny ho mety, ka nasehony izany tamin’ny alalan’ilay fampanarahana ny lalàna sy izay andrasany amin’ilay boka voadio.
Fa raha ny fisehoan’ny heriny kosa no ambara dia miseho izany amin’ny fanekeny handray ny talahon’ny mila vonjy. Fantatra fa ny fahabokana dia manery ny olona tratran’izany mba ho any ivelan’ny fiarahamonina. Koa ny herin’i Jesoa manadio dia ny famerenany indray ilay nangataka taminy (ilay boka) hiverina ao amin’ny fiarahamonin’ny samy olona sy ny olona mifandray amin’Andriamanitra ka nanambaran’ny Tompo ny amin’ny hankanesana any amin’ny Tempoly.
Kolosiana 1, 24- 29 : Eto amin’ity perikopa ity, ny Fiangonana no fisehoana sy fitohizan’ny asam-pamonjen’i Jesoa Kristy (and. 24), amin’izany, ny Fiangonana dia tonga ho fanehoana an’i Jesoa Kristy, Tompo Andriamanitra (and. 27). Noho izany, isika Fiangonana no fisehoan’Andriamanitra velona. Mahazo manantena ny Fiangonana fa hahomby amin’izay ataony izy ka ho tànan’Andriamanitra mahery satria Izy Jesoa Kristy Andriamanitra no velona ao aminy.